7000 Series Aluminium Alloy efere - China Hangzhou Jinding Aluminium
Omenala Solution Guoxin tumadi-enye 2000 series, 6000 usoro na 7000 usoro aluminum alloy efere, na-enye 1000 usoro ka 7000 usoro aluminum alloy ọkpọkọ na mkpara na karịrị afọ iri 'ahụmahụ. Biko gwa anyị gị mkpa dị ka aluminum alloy ọkwa, nkọwa na okpomọkụ omume nke 7000 usoro aluminum alloy, anyị ụlọ ọrụ nwere ike nye aluminum alloy usoro ihe ngwọta na-eme omenala ekara aluminum alloy ngwaahịa. Anyị ike ikwu Aluminium Alloy Products 7075 Aluminium Alloy Plat ...
Guoxin tumadi-enye 2000 series, 6000 usoro na 7000 usoro aluminum alloy efere, na-enye 1000 usoro ka 7000 usoro aluminum alloy ọkpọkọ na mkpara na karịrị afọ iri 'ahụmahụ. Biko gwa anyị gị mkpa dị ka aluminum alloy ọkwa, nkọwa na okpomọkụ omume nke 7000 usoro aluminum alloy, anyị ụlọ ọrụ nwere ike nye aluminum alloy usoro ihe ngwọta na-eme omenala ekara aluminum alloy ngwaahịa.
7075 Aluminium Alloy efere
7050 Aluminium Alloy efere 7050 aluminum alloy bụ nke na-eme ugbo elu bughi akụkụ ndị dị otú ahụ dị ka oké aluminum alloy efere, extrusion akụkụ, omenala ekara forgings ma na-anwụ forgings. Nke a na ụdị aluminum alloy elu iguzogide corrosion, iguzogide imesi corrosion cracking, na ike ọgwụgwụ na-eguzogide, nakwa dị ka nnukwu mgbaji ọkpụkpụ ike.
7A04 Aluminium Alloy efere 7A04 aluminum alloy bụ nke na-eme ugbo elu akpụkpọ, kposara, na ibu arọ bughi akụkụ dị ka doo girder, etiti, nku ọgịrịga, alighting gia, wdg
Guoxin ike na-enye 7000 Series Aluminium Alloy efere dị ka ndị a:
7A04 Aluminium Alloy efere
7005 Aluminium Alloy efere
7039 Aluminium Alloy efere
7049 Aluminium Alloy efere
7072 Aluminium Alloy efere
7175 Aluminium Alloy efere
7178 Aluminium Alloy efere
7475 Aluminium Alloy efere
Previous: 6000 Series Aluminium Alloy efere